သြစတြေးလျတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း - သင်မြင်နိုင်သမျှ Absolut ခရီးသွားခြင်း
သြစတြေးလျသည် Oceania ရှိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၎င်း၏ထောင့်များကိုသဲသောင်ပြင်များဖြင့်ရော၊ စူးစမ်းလေ့လာရကျိုးနပ်သည့်မတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုကိုပါပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒီတော့ခရီးသွား extremely ည့်သည်အမျိုးမျိုးသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ ကျနော်တို့ခြေရာခံလိုက်ပြီးပြဇာတ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sydney Opera House ကိုသွားရပါမယ်။ ဆစ်ဒနီမြို့တွင်လည်းဆိပ်ကမ်းတံတားအပြင်ဆိပ်ကမ်း၊ စိန့်မေရီဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ကမ်းခြေများလည်းရှိသည်။
ကျနော်တို့မဲလ်ဘုန်းမြို့ကိုသွားလျှင်သူ၏စာကြည့်တိုက်သာမကရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်သို့မဟုတ် Queen Victoria စျေးကွက်ကိုလည်းမလွဲနိုင်ပါ။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှစ်ခုအပြင်ထပ်ခါတလဲလဲဘရစ္စဘိန်း၊ အဒဒလိုင်ယာ၊ ပါ့သ် (သို့) ရွှေကမ်းခြေစတဲ့မြို့တွေကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့မမေ့နိုင်တဲ့မြို့ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, မြို့ကြီးများနှင့်သူတို့၏ဆွဲဆောင်မှုတွေအပြင်ပန်းခြံareaရိယာကိုမမေ့နိုင်ပါ။ လူသိအများဆုံးအချို့မှာ Nambung အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့မဟုတ် Purnululu နှင့် Karijini တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်အများဆုံးပြောခဲ့သည့်အချက်မှာတမန်တော် ၁၂ ပါး၏ဥယျာဉ်သည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ Wallaman ရေတံခွန်များသို့မဟုတ်၎င်း၏ကျွန်းများနှင့် Barrier Reef အပြင်။ ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုစချင်လဲ။
ပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သော Hillier Lake တွင်နှစ်မြှုပ်ပါ
por Isabel လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
por maruuzen လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
အကြီးဆုံးသြစတြေးလျကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေလဲ။ ဤမေးခွန်းသည်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်ပယ်ပြင်ပ၌ရှားပါးသည်။ On …
por Isabel လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
အကယ်၍ သင်၏နောက်အားလပ်ရက်တွင်သင်သည်သြစတြေးလျသို့သွားလိုလျှင် (သို့) ဤနိုင်ငံတွင်လေ့လာလိုလျှင် ...
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
နှစ်စဉ်ထောင်နှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား Australia ည့်သည်များသည်ကျွန်း - တိုက်ကြီးကိုရှာဖွေရန်နှင့်theစတြေးလျ၏ဘဝပုံစံကိုခံစားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထို ...
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
သြစတြေးလျကိုဒီလိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ ၄ င်းရဲ့အထင်ကြီးလောက်တဲ့သဘာဝကြွယ်ဝမှုပါ။ မန်များ ...
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
por Alberto ခြေထောက်များ လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
အုန်းပင်များ၊ ရေပြာများနှင့်ရွှေသဲများကိုမှီခိုခြင်း။ ငါတို့ခရီးသွားလာနေသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဆွဲယူပြီးဖြစ်လာနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးပုံဖြစ်သည် ...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိကမ်းခြေ ၈ ခုသည်ညအချိန်တွင်တောက်ပနေသည်